RECYCLER VIRUS PROBLEM IN FLASH DRIVE — MYSTERY ZILLION
မူလ › Hardware
RECYCLER VIRUS PROBLEM IN FLASH DRIVE
September 2011 edited October 2011 in Hardware
<img src="http://hfimage.net/images/1j3jnod1uaq18xixzij6.jpg"; border="0" width="1024px" /></a>
Hiren Boot CD နဲ့လည်းစမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ Linux မှာတပ်ပြီးFormat ချပြီးပြီ မရဘူး။ Write Protect
ပဲဖြစ်နေတယ်။ သော့ချိတ်ပဲလုပ်ရတော့မှာလား။ ကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါ။ Avira နဲ့သတ်လဲ မရဘူး။ ပြန်ပေါ်လာတယ် ဗိုင်းရပ်စ်ဖိုင်တွေက။</font>
မရတော့ဘူးဗျ... ဘာအမျိုးအစားလဲ... အကုန်စမ်းပြီးပြီ... အကယ်လို့ စတစ် က အော်ရဂျင်နယ် ဆိုရင်
သက်ဆိုင်ရာ ဆိုဒ်မှာ ချစ်ဆက် ဖော်မတ် ရိုက်တဲ့ဆော့ဝဲ ရှိတတ်တယ်.. အဲ့ကောင်နဲ့ဆိုရတယ်ဗျ..
ကျန်တဲ့နည်းလမ်း မရှိတော့ဘူး။။။ တလောကပဲဖြစ်သေးတယ်ဗျ..
October 2011 Moderators
Virus might be in your Windows, too. To only cure your flash drive, call Command and Prompt.
Then goes to your Drive letter.
del * ( if you want, it means delete all files, or you can delete files that you want by del <filename> )
dir ( check files again )
the easiest method is make virus scanning your computer with KIS 2012.
<font color="red">အကုန်နည်းပါးစမ်းကြည့်ပြီပါပြီ။ ကိုသီဟ ပြောတဲ့ Chipset Format ရိုက်တာကိုတော့မစမ်းရသေးပါ ဘူး။ စက်ကတော့သေချာတာကတော့မရှိပါ။ Avira နဲ့လည်းစစ်ပြီးပြီး။ စက်ကော၊ စတစ်ပါ စစ်ပြီးပြီ။ တွေ့ရင်သတ်ပါတယ်။ Write Protect ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဖျက်မရတာပါ။</font>
<font color="red">Flash Drive model is <font color="green" size="39">"ADTA"</font></font>
please test with this link http://windows7themes.net/the-disk-is-write-protected-how-to-remove.html
stick ထိုးတဲ့ မူရင်းကွန်ပြူတာမှာပါ virus ဝင်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ကွန်ပြူတာကို အရင် virus ကင်းအောင် လုပ်ပါ
That is not recycler virus. That must be Win32/Ramnit. It is very difficult to remove. Under C:\_Program Files\_Microsoft, you will see watermark.exe. That means the virus is installed on your system. It infects (THOUSANDS OF) html, dll and exe files by injecting malicious code into them. It has infected my computer, too(just several days ago). For more info, look at <a href="http://www.eset.eu/encyclopaedia/win32-ramnit-a-backdoor-ircnite-bwy-w32?lng=en">http://www.eset.eu/encyclopaedia/win32-ramnit-a-backdoor-ircnite-bwy-w32?lng=en</a>.
To remove it, I'm still trying. You can also try on your own, find on the internet! Anybody who knows how to remove it, pls do post it here.